22 Efa nanakaiky ny fetin’ny mofo tsy misy lalivay, dia ilay fety atao hoe Paska.+ 2 Ary nitady tetika mahomby hamonoana azy ho faty ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna,+ satria natahotra ny olona izy ireo.+ 3 Fa i Satana niditra tao amin’i Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, izay anisan’ny roa ambin’ny folo lahy.+ 4 Ary lasa i Jodasy ka niresaka tamin’ny lehiben’ny mpisorona sy ny lehiben’ny mpiambina ny tempoly momba ny tetika mahomby hamadihany azy ka hanolorany azy amin’ireo.+ 5 Koa faly ireo, ary nifanaraka fa hanome azy farantsa volafotsy.+ 6 Dia nanaiky izy, ka nitady izay fotoana mety tsara hamadihany an’i Jesosy ka hanolorany azy tamin’ireo, amin’ny fotoana tsy misy olona.+ 7 Tonga ny andro fankalazana ny fetin’ny mofo tsy misy lalivay, dia ilay tsy maintsy hamonoana biby atao sorona amin’ny Paska.+ 8 Koa naniraka an’i Petera sy Jaona i Jesosy, nanao hoe: “Mandehana manomana+ ny Paska hohanintsika.” 9 Hoy ireo taminy: “Aiza no tianao hanomananay azy?” 10 Hoy izy:+ “Hisy lehilahy iray mitondra siny tany feno rano hifanena aminareo, raha vao miditra ny tanàna ianareo. Araho any amin’izay trano idirany izy.+ 11 Ary izao no holazainareo amin’ny tompon’ilay trano: ‘Hoy ny Mpampianatra aminao: “Aiza ny efitra fandraisam-bahiny azoko ihinanana ny Paska miaraka amin’ny mpianatro?”’+ 12 Ary izy hampiseho aminareo efitra malalaka any ambony rihana, izay efa misy fanaka. Ao no anomano ny Paska.”+ 13 Dia lasa izy roa lahy, ary nahita araka izay nolazaina taminy, ka nanomana ny Paska izy ireo.+ 14 Dia tonga ny fotoana, ka nandry ilika hisakafo izy, ary teo koa ny apostoly.+ 15 Ary hoy izy tamin’ireo: “Mba niriko mafy ny hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, alohan’ny hijaliako. 16 Fa lazaiko aminareo fa tsy hihinana ny Paska intsony aho, mandra-pahatanterak’izany ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.”+ 17 Dia noraisiny ny kaopy+ natolotra azy, ka nisaotra an’Andriamanitra izy, ary nanao hoe: “Raiso ity ka isotroy, ary ampitampitao amin’ny tsirairay aminareo. 18 Fa lazaiko aminareo fa manomboka izao, dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatongan’ny fanjakan’Andriamanitra.”+ 19 Dia nandray mofo+ koa izy ary nisaotra an’Andriamanitra. Ary notapahiny ilay mofo, ka nomeny azy ireo, sady hoy izy: “Ity no* vatako+ izay homena ho anareo.+ Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.”+ 20 Toy izany koa no nataony tamin’ny kaopy,+ rehefa avy nihinana ny sakafo hariva izy ireo. Dia hoy izy: “Ity kaopy ity no fifanekena vaovao+ miorina amin’ny rako,+ izay halatsaka ho anareo.+ 21 “Efa eto amiko, eto an-databatra, ny tanan’ilay hamadika+ ahy.+ 22 Fa ny Zanak’olona handeha araka izay efa voatendry,+ nefa lozan’izay olona nampiasaina hamadihana azy!”+ 23 Koa nanomboka nifanontany izy ireo hoe iza amin’izy ireo àry no mitady hanao izany.+ 24 Ary nifanditra mafy koa izy ireo momba ny hoe iza no noheverina ho lehibe indrindra teo aminy.+ 25 Fa hoy izy tamin’ireo: “Ny mpanjakan’ny firenena manjakazaka aminy, ary izay manana fahefana eo aminy dia atao hoe Mpanao soa.+ 26 Fa tsy tokony ho tahaka izany ianareo.+ Fa izay lehibe indrindra eo aminareo no aoka ho toy ny zandriny indrindra,+ ary izay mitarika ho toy ny mpanompo.+ 27 Fa iza moa no lehibe kokoa: Ilay mandry ilika hisakafo sa ilay manompo? Tsy ilay mandry ilika ve? Fa izaho dia mpanompo teo aminareo.+ 28 “Ary ianareo no nifikitra+ tamiko tao anatin’ireo fitsapana nahazo ahy.+ 29 Koa manao fifanekena aminareo aho, toy ny nanaovan’ny Raiko fifanekena+ tamiko, ho amin’ny fanjakana,+ 30 mba hihinana+ sy hisotro eo amin’ny latabatro ao amin’ny fanjakako ianareo,+ ka hipetraka eo amin’ny seza fiandrianana+ hitsara ny foko roa ambin’ny folon’ny Israely. 31 “Ry Simona, ry Simona, mitaky ny hahazoany anareo i Satana+ mba hosivaniny toy ny vary.+ 32 Efa nitalaho+ ho anao anefa aho mba tsy ho levona ny finoanao. Ary raha vao tafarina ianao, dia ampaherezo+ ny rahalahinao.” 33 Dia hoy i Petera: “Vonona hiaraka aminao aho, Tompo ô, na ho any am-ponja na ho amin’ny fahafatesana.”+ 34 Fa hoy izy: “Lazaiko aminao, ry Petera, fa mbola tsy maneno akory ny akoho anio, dia handa intelo ho tsy mahalala ahy ianao.”+ 35 Ary hoy koa izy tamin’ireo: “Nisy nahory anareo ve, fony aho naniraka+ anareo tsy nitondra fitoeram-bola na kitapom-batsy na kapa?” Hoy ireo: “Tsy nisy!” 36 Dia hoy izy: “Fa ankehitriny kosa, aoka izay manana fitoeram-bola hitondra izany, ary toy izany koa izay manana kitapom-batsy. Ary aoka izay tsy manan-tsabatra hivarotra ny akanjony ivelany ka hividy sabatra. 37 Fa lazaiko aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao: ‘Ary natao ho isan’ny tsy tan-dalàna izy.’+ Fa efa eo am-pahatanterahana izao izay voasoratra mahakasika ahy.”+ 38 Dia hoy ireo: “Ireto misy sabatra anankiroa, Tompo ô!” Hoy izy: “Ampy ireny.” 39 Dia lasa izy ka nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva, araka ny fanaony, ary nanaraka azy koa ny mpianatra.+ 40 Hoy izy tamin’izy ireo rehefa tonga teo amin’ilay toerana izy: “Mivavaha foana mba tsy ho resin’ny fakam-panahy.”+ 41 Ary nihataka kely tokony ho indray mitora-bato izy, dia nandohalika ka nivavaka 42 hoe: “Ray ô, raha sitrakao, dia esory amiko ity kaopy* ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao,+ fa ny anao.”+ 43 Dia nisy anjely anankiray avy any an-danitra niseho taminy, ary nankahery azy.+ 44 Fa nihamafy ny fijaliany, ka vao mainka nivavaka mafimafy kokoa hatrany izy,+ ary nanjary tahaka ny ra nitete teo amin’ny tany ny hatsembohany.+ 45 Dia nitsangana izy rehefa avy nivavaka, ary nankeny amin’ny mpianany, ka nahita azy ireo efa rendremana noho ny alahelo.+ 46 Koa hoy izy tamin’ireo: “Nahoana ianareo no matory? Mitsangàna ary mivavaha foana, mba tsy ho resin’ny fakam-panahy.”+ 47 Raha mbola niteny izy, dia indreny nisy vahoaka be tonga, ary nandeha teo alohan’ireo ilay atao hoe Jodasy, izay anisan’ny roa ambin’ny folo lahy.+ Dia nanatona an’i Jesosy izy mba hanoroka azy.+ 48 Fa hoy i Jesosy taminy: “Oroka+ ve no entinao hamadihana ny Zanak’olona, ry Jodasy?” 49 Ary nahita izay efa hitranga ireo teo akaikiny, ka hoy ireo: “Hamely amin’ny sabatra+ ve izahay, Tompo ô?” 50 Ny iray taminy aza tena namely an’ilay mpanompon’ny mpisoronabe mihitsy ka nahafaka ny sofiny havanana.+ 51 Fa hoy i Jesosy: “Aoka izay!” Ary nokasihiny ilay sofina, ka nositraniny ilay mpanompo.+ 52 Dia hoy i Jesosy tamin’ny lehiben’ny mpisorona sy ny lehiben’ny mpiambina ny tempoly ary ny anti-panahy izay tonga teo hisambotra azy: “Mivoaka mitondra sabatra sy kibay toy ny hisambotra mpangalatra ve ianareo?+ 53 Teo aminareo isan’andro aho tao amin’ny tempoly,+ nefa tsy naninjitra ny tananareo hamely ahy ianareo.+ Fa izao no fotoananareo+ sy ny fahefan’ny+ haizina.”+ 54 Dia nisambotra azy izy ireo, ka nitondra+ azy ho ao an-tranon’ny mpisoronabe.+ Fa i Petera kosa nanaraka teny lavidavitra teny.+ 55 Ary nandrehitra afo teo afovoan’ny tokotany izy ireo ka niara-nipetraka teo. Dia nipetraka teo niaraka tamin’izy ireo koa i Petera.+ 56 Fa nahita azy nipetraka teo akaikin’ny afo ny mpanompovavy anankiray ka nandinika azy, ary nanao hoe: “Io koa niaraka taminy.”+ 57 Fa nanda+ izy hoe: “Tsy mahafantatra azy aho, ravehivavy.”+ 58 Taoriana kelin’izay dia nisy olon-kafa indray nahita azy, ka nanao hoe: “Naman-dry zareo koa ianao.” Fa hoy i Petera: “Tsy naman-dry zareo aho, ralehilahy.”+ 59 Adiny iray teo ho eo taorian’izay, dia nisy lehilahy nanizingizina mafy hoe: “Tena niaraka taminy tokoa io, satria Galilianina!”+ 60 Fa hoy i Petera: “Tena tsy fantatro mihitsy izay lazainao, ralehilahy.” Ary avy hatrany dia nisy akoho naneno, raha iny izy mbola niteny iny.+ 61 Dia nitodika ny Tompo ka nijery an’i Petera. Ary tsaroan’i Petera ny tenin’ny Tompo izay nilaza taminy hoe: “Raha mbola tsy maneno ny akoho anio, dia handa ahy intelo ianao.”+ 62 Koa nivoaka tany ivelany izy ka nitomany tamin’alahelo be.+ 63 Ary nanao an’i Jesosy ho fihomehezana+ sy nikapoka+ azy ny olona niambina azy.+ 64 Dia nosaronan’ireo ny tavany, ka nanontaniany hoe: “Maminania! Iza ilay namely anao teo?”+ 65 Ary mbola nilaza zavatra maro hafa ireo, mba hanevatevana+ azy. 66 Maraina ihany ny andro, rehefa ela ny ela. Dia nivory+ ny anti-panahy rehetran’ny vahoaka, sy ny lehiben’ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna. Ary nentiny tao amin’ny tranon’ny Fitsarana Avo Jiosy izy, ka nataony hoe:+ 67 “Lazao aminay raha ianao no Kristy.”+ Fa hoy izy: “Na holazaiko aminareo aza, dia tsy hino mihitsy ianareo.+ 68 Ary raha hanontaniako ianareo, dia tsy hamaly mihitsy.+ 69 Fa manomboka izao, dia hipetraka eo ankavanan’ilay+ Andriamanitra mahery+ ny Zanak’olona.”+ 70 Dia hoy izy rehetra: “Zanak’Andriamanitra ve izany ianao?” Hoy izy: “Voalazanareo+ fa izany aho.” 71 Dia hoy ireo: “Inona indray no ilantsika porofo?+ Isika mihitsy no nandre izany avy tamin’ny vavany.”+